Khamiis, Oct 8 , 2020-Ciidamada dowladda oo isaga baxay deegaano muhiim u ah iyo Al-shabaab oo dib u qabsaday – LaacibOnline
Khamiis, October 8, 2020 (HOL) -Wararka naga soo gaaraya deegaanadda Basra iyo Deniga oo dhaca dhinaca Galbeed ee degmada Balcad ayaa sheegaya in halkaasi ay isaga soo baxeen ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana dib u qabsaday deegaankaasi dhaqdhaqaaqa Al-shabaab.Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa faarujiyay deegaano dhowr ah sida Basra, Daniga, Baalow, Buulo kuunto, Walamoy iyo deegaano kale.Ciidamada maanta isaga soo baxay deegaanadaas ayaa maalmahii lasoo dhaafay howlgalo waxay ka wadeen deegaanadda dhinaca Galbeed kaga beegan degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Khamiis, October 8, 2020 (HOL) – Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeymo diyaarado loo maleynayo iney yihiin kuwa Kenya ay ka geysteen tuulooyin hoos taga Gobolka Gedo oo sababay dhimasho iyo dhaawac .
Khamiis, October 8, 2020 (HOL) – Raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Khaliif Galaydh ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee caasimada dawlad deegaanka Soomaalida.
Khamiis, October 8, 2020 (HOL) – Ilwad Elman oo ah Gabadh Soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqda Nabadda ayaa markii labaad kamid noqotay dadka u sharraxan abaalmarinta nabada adduunka ee Nobel Peace Prize, sida laga soo xigtay Machadka Daraasaadka Nabadda (PRIO) ee fadhiggiisu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway.
Khamiis, October 8, 2020 (HOL) – Kooxda Al-Shabaab ayaa sii daayay labo dhakhtar oo u dhashay Cuba oo laga afduubtay Kenya laguna haystay sanad iyo badh gudaha Soomaaliya, sida lagasoo xigtay saraakiil.
← Somalia: Jubaland Chamber of Commerce Elected in Kismayo
COVID-19 vaccine trials put on hold after more than 1,000 Minnesota patients already enrolled →
Sabti, Oct 24, 2020-Hindia oo sheegtay in Soomaaliya lagu haysto shaqaale dalkeeda u dhashay oo u shaqeynayay shirkad ganacsi